Isinyathelo 1: Udaba Lokuqala Ukusekelwa. Kunokungeniswa okuningi okushibhile, ikakhulukazi okuvela eChina, emakethe. Kepha ama-lasers yimishini eyinkimbinkimbi futhi ayaphuka futhi adinga ukulungiswa. Qiniseka ukuthi inkampani oyithengayo inokwethenjelwa futhi inikeza ukusekelwa okuhle kuwe nasemshinini wabo ngemuva kokuyithenga ....
Eminyakeni edlule, umshini we-laser oqoshiwe ungenza kuphela umbhalo omncane oqoshiwe ngenxa yokulinganiselwa kobuchwepheshe. Ngokuvuselelwa okuqhubekayo nokuthuthuka kobuchwepheshe, i-motherboard yokulawula ekhiqizwe manje ingasekela kahle ukuqoshwa kwefomethi enkulu. Ngenxa yalokho, ukucushwa okuphansi kwe-laser umbhalo / ...
Ukusetshenziswa laser lokuqopha ahlabayo umshini
Abakhiqizi bemishini yokusika ye-Laser. Umshini wokusika we-Laser oqoshiwe ngumkhiqizo wobuchwepheshe obuphezulu, okuyi-optical, mechanical, umkhiqizo wokuhlanganiswa kagesi. Ngokuthuthuka okuphumelelayo kobuchwepheshe bokuqopha i-laser, imboni yaqala ukukhula ngokushesha. Kuze kube manje, uhlelo o ...